10 kwesịrị-nwere iPhone Photo Ngwa
Na-ewere foto bụ fun, nke bụ na o yiri mere iPhone ike a igwefoto na ha smartphones n'oge na na egwuregwu. Ma ị na-ewere selfies, foto nke gị na ụmụ gị, ma ọ bụ eziokwu ìgwè gbaa, ọ bụ kemfe ka gị iPhone igwefoto na njikere maka ihe ọ bụla nke edinam. Ezie na iPhone igwefoto bụ nnọọ mma maka ma ka gbaa na video, e nwere ọtụtụ nke ukwuu tinye-ons dị site a ọnụ ọgụgụ nke na isi mmalite ndị ọ bụla na-amu amu photographer kwesịrị ịtụle tụnyere n'ime ha iPhone igwefoto gia.
Lee ụfọdụ n'ime ihe kwesịrị-Haves na ọ dịghị akpan akpan iji:
The Kogeto Dot: Nke a bụ a snap-on ngwa na-arụ ọrụ dị a oghere otú i nwere ike ọzọ rụọ ọrụ nke ọma na-360-ogo panoramic video na gị iPhone 5, 4S ma ọ bụ 4.
Nke a bụ ezi uche ọnụ oghere na, mgbe eji na njikọ na enyi ngwa Looker, nke dị site iTunes Echekwala maka free. The version maka iPhone 4, 4S na 5 dị na Amazon maka $45.95. The Dot nwekwara retails on shop.kogeto.com maka $ 39.
OlloClip: Nke a bụ a pụrụ iche atọ-na-otu oghere na-enye ohere foto na-a nso nke photos na a fisheye, nnukwu ma ọ bụ obosara-n'akuku oghere. Retailing on olloclip.com maka $ 70, ọ bụ dị atọ na agba: nwa,-acha ọcha na-acha uhie uhie. Ọ bụkwa dakọtara na iPhone 4, 4S na nke 5.
iPhone SLR Ugwu: Nke a bụ a mma n'anya mmegharị a omenala iPhone melite na-ejikọta ya omume ọma na a igwefoto oghere. The mgbakwunye na-arụ ọrụ kpọmkwem Canon na Nikon SLR anya m, ma e nwere nta mgbanwe na a ghaghị ime ka mmekọrịta gị iPhone na oghere na ajụjụ. The online foto ngwa ahịa Photojojo akanyam Ugwu maka $ 249, ma adọ aka ná ntị na mgbanwe na mkpa ka a mere nwere ike ime ka ụfọdụ obi nkoropụ.
Factron quattro: The quattro ka nke duralumin - kpọmkwem ihe onwunwe na-eji na ụgbọelu na-ewu. E nwere ọtụtụ kennyeghari anya m na ike ga-eji na a fechaa ikpe na ike ga-ndokwasa na aluminum akụkụ nke ikpe. E nwekwara a calfskin nkwado nke na-abịa dị iche iche anya, dị ka agụ iyi na ngwere. The nnukwu nsogbu bụ na aluminum nwere ike ime ka ụfọdụ mbipụta na WiFi ma ọ bụ GPS arụmọrụ nke iPhone onwe ya, nakwa na anya m na-n'ezie rere iche iche. Na gbakwunyere n'akụkụ, Otú ọ dị, anya m ka i oyiyi na a fisheye, obosara n'akuku na closeup anya m.
Glif tripod Guzosie na Ugwu: Nke a n'ezie oyi guzoro na ugwu-arụ ọrụ maka iPhone 4, 4S na 5. The n'ugwu ka nke rubberized plastic na threading na ya na-enye ohere ka ọ lash jidesie kasị tripod guzo. Ọ bụrụ na ị nwere ewepụghị elu na ugwu nwere ike na-anọdụ na, ọ nwere ike na-arụ ọrụ dị ka a guzoro na-eme ka a anụ n'elu n'elu nke na-ogbugba. Retailing maka $ 20, nnọpụiche dị na www.studioneat.com.
Zgrip iPhone Obere: ọzọ dị ịrịba ama na ngwá ọrụ foto na budding cinematographers myiri, a handgrip na a ofu, clawlike n'ugwu awade ndị nwere mmasị na-agbapụ na-aga ohere maka nke a dokwuo anya na ukwuu kwụsie ike. The adịgide e mere iji zere ihe mgbochi nke igwefoto oghere, na e nwere ihe a na eri na n'elu nke adịgide iji itinye ọkụ akụrụngwa. Ịnye ọnụahịa maka Zgrip na-amalite mgbe ihe $ 69 na ngwá ọrụ dị na Zacuto si online ụlọ ahịa na http://store.zacuto.com/zgrip-iphone-jr/.
ZoomIt SD Kaadị Reader: Nke a ikwunye na Play ịke kaadị-agụ nwere ike na-aga a ogologo ụzọ n'akuku-enyere gị aka na-ese foto anya SD kaadị si gị igwefoto na-etinye ya na gị na smartphone. Nke a-ezere hassle nke na-agbalị ka mmekọrịta gị handheld igwefoto na kọmputa gị; kama, ị pụrụ nanị ikwunye ya n'ime gị iPhone n'ọdụ ụgbọ mmiri na bulite gbaa ahụ mmadụ mgbasa ozi na saịtị nke gị nhọrọ. Na a na-amalite ọnụahịa mkpọsa nke gburugburu $ 60, a na ngwaọrụ nwere ike inyere ọrụ n'ezie ga-esi photos jidesie ha iPhone ngwa ngwa maka bugoo. Nke a bụkwa dị na ZoomMediaPlus online ụlọ ahịa.
Photojojo Anya m: Ndị a anya m na-eji na a magnetik mgbanaka na edoghi zuru okè na gị iPhone si wuru na-igwefoto oghere. Na mgbanaka, ị nwere ike itinye onye ọ bụla n'ime anọ anya m: obosara n'akuku, fisheye, nnukwu na telephoto. Onye ọ bụla oghere nwere ike zụrụ n'otu n'otu n'ihi na $ 20 onye ọ bụla, mgbe fisheye oghere na-agba ọsọ maka $ 25. Dum set nke anya m, Otú ọ dị, a pụrụ $ 49 si Photojojo si online ụlọ ahịa.
Joby GripTight GorillaPod Guzosie: Nke a bụ oké iPhone guzoro na-enye gị ohere mwekota gị iPhone fọrọ nke nta n'ebe ọ bụla maka kacha na foto -ndị. GorillaPod nwere mgbanwe, na-wrappable ụkwụ na-ekwe ka ị melite ekwentị gị a ogbugba mgbe nghọta na otu alaka, metal osisi ma ọ bụ ihe ọ bụla ọzọ ma ọ bụ vetikal kehoraizin elu. Ọ nwekwara ike-eji dị ka a guzoro otú i nwere ike na-agụ anya gị iPhone ma ọ bụ na-ekiri vidio. The amalite price maka nguzo hovers na gburugburu $ 30 ma ọ bụ dị na Joby si online ụlọ ahịa.
iFlash: N'ihi na ndị na emewo ike gwụrụ nke iPhone si wuru na-flash na ya ikwu irè, e nwere iFlash. Dị na Amazon na Cyanics, nke a bụ a $ 13 sọrọ-arụ ọrụ flash; mgbe flash bụ na ọwa na ọnọdụ, ọ ọrụ dị ka a tọọchị. The iFlash awade amu amu foto ohere maka obere ihe ìhè na ha foto.
6X teliskop Na Crystal Ileba: Nke a bụ a ga-nwere maka ndị foto ndị na-achọ ụzọ ọhụrụ weghara ezigbo foto mgbe ị dị nnọọ ike inwe nso ezu. Malite mgbe ọ dị nanị $ 16, nke a 6X "teliskop" mounts jidesie gị iPhone 4 na 4S mfe na-enye gị ohere weghara oge site n'ebe di anya.
E nwere ọtụtụ nke kwere omume-aga na-Ngwa maka amu amu photographer na ya ma ọ bụ ya iPhone. Ma ọ bụ ihe ọhụrụ guzoro, efego ma ọ bụ oghere, e nwere onye na-amụba ụwa nke ohere mgbe ọ na-abịa-ewere foto na gị iPhone. Niile i nwere ime bụ itinye ego a-ntà, gị ihe oyiyi ga-ekele gị.
Atụmatụ maka Olee otú Jiri iPhone Ejikwa Home Security System
Were Controal nke Siri na iPhone: Chọta, Kwado, Dezie Wụk na Secure Siri
iPhone 6s (Plus) Hapụ Ụbọchị 2015: Mgbe nwere ike ị na-ahụ iPhone 6s (Plus)?
Tọgharịa Jaibroken iPhone na /-enweghị adịkwa jailbroken Atụmatụ
> Resource> iPhone> 10 kwesịrị-nwere iPhone Photo Ngwa